Building Mora- Ivato: hanomboka tsy ho ela ny asa | NewsMada
Building Mora- Ivato: hanomboka tsy ho ela ny asa
Efa misrosony dingana voalohany ary hanomboka tsy ho ela ny tena asa fanamboarana ilay “Building Mora” eny Ivato, tetikasa goavana ao anatin’ny vinan’ny fitondrana. Nidina ifotony nijery ny fijotry ny asa teny an-toerana, omaly, minisitra lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon’ny ministeran’ny Fanajariana ny Tany, sy ny Asa Vaventy, Zasy Angelo, niaraka tamin’ny tale jeneralin’ny Analog izay misahana io tetikasa io.
Tratra alohan’ny fotoana voafaritra, telo volana, ny fandravonana ny toerana sy ny fanadihadiana momba ny toe-tany mba hampiroso haingana ny asa. Araka izany, hanomboka tsy ho ela ny asa fananganana. “Mifanindran-dalana eo ny fitsirihana ara-teknika amin’ny fanajariana ireo toerana ambiny mba hiantohana ny fahatomombanana”, araka ny nambaran’ny minisitra. Tonjona amin’izao fanatanterahana ny tetikasa izao ny hananan’ny olom-pirenena toeram-ponenana mendrika sy sahaza ny maha olona.
Raha tsiahivina, trano miisa 38 misy rihana efatra avy no hatsangana mba ho fanatanterahana ny “velirano faha-11” amin’ny vinan’ny filoha Rajoelina Andry, izay tetikasa avy amin’ny famatsiam-bolan’ny fanjakana malagasy madiodio. Building 10 000 isan-taona no tanjona manerana ny Nosy.